नेपालका 10 उत्कृष्ट अनलाइन क्यासिनो 2022 – खेल्नुहोस् र जित्नुहोस्
नेपालका उत्कृष्ट अनलाइन क्यासिनोहरू 2022
नेपालमा अनलाइन जुवा खेल्नु पहिले भन्दा धेरै सजिलो छ । तपाईंले डेस्कटप पीसीमा बस्नुपर्दैन र आफ्नो मोबाइलबाटै खेल्न सक्नुहुन्छ । तपाईं काठमाडौं वा कन्चनपुर जहाँ भए पनि अनलाइन खेल्न सक्नुहुन्छ । हामीले नेपाली जुवा खेलाडीहरूका लागि सर्वोत्कृष्ट अनलाइन क्यासिनोको व्यवस्था मिलाएका छौं भन्ने थाहा पाउँदा तपाईं खुसी हुनु हुनेछ ।
हाम्रो कुनै पनि टप-रेटेड अनलाइन क्यासिनोमा साइन अप गर्नुहोस् र पाउनुहोस्:
हजारौं नि:शुल्क र वास्तविक पैसा प्रयोग हुने खेलहरू
नेपाली रुपैयाँ प्रयोग गरेर सजिलै डिपोजिट गर्ने र पैसा निकाल्ने
नेपाली र अंग्रेजी भाषामा ग्राहक सहायता
प्रिमियम सुरक्षा सावधानीहरू अपनाइएको
नेपाली खेलाडीहरूका लागि सर्वोत्कृष्ट १० क्यासिनोहरू 2022
#1 टप रेट गरिएको क्यासिनो
हाम्रो कालोसूचीमा परेका अनलाइन क्यासिनोहरूबाट बच्नुहोस्
हामीले कुनै पनि इन्टरनेट क्यासिनो सिफारिस गर्नुपूर्व त्यसले विश्वसनीय भुक्तानी गर्छ गर्दैन, दिन्छु भनेको बोनस दिन्छ कि दिंदैन, ग्राहक सेवा कतिको छरितो छ, सुरक्षा, र कतिको विश्वासिलो छ भनेर परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रयोगकर्तालाई जोखिम हुनसक्ने खालका क्यासिनो भेट्यौं भने त्यसबाट बच्नका लागि हामी कालोसूचीमा राख्छौं । भर्खरै थपेका केही क्यासिनोहरू यहाँ छन्:
नि:शुल्क खेलहरू खेल्नुहोस्
तपाईं हाम्रो साइटमै विभिन्नखालका क्यासिनो खेलहरू नि:शुल्क खेल्न सक्नुहुन्छ । उपलब्ध खेलहरू तल गएर हेर्नुहोस्!
तपाईंको उत्कृष्ट क्यासिनो खोज्नुहोस्
नेपालमा जुवा बारेका तथ्यांकहरू
नेपालमा6वटा क्यासिनोहरू छन्
जुवा खेल्ने व्यक्ति कानुनी रूपमा 21 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ
स्थलगत क्यासिनोहरू पर्यटकका लागि मात्र खुला छन्
क्यासिनोबाट जितेको रकममा कर लाग्दैन (किनभने यो पर्यटकले मात्र खेल्न पाउँछन्)
ब्ल्याकज्याक नेपालको सबैभन्दा बढी खेलिने क्यासिनो खेल हो
हाम्रा विज्ञहरूले क्यासिनोको समीक्षा कसरी गर्छन्
पृष्ठभूमि र सुरक्षा जाँच
प्रत्येक क्यासिनोलाई थप जाँच गर्नु भन्दा पहिले हामी केही मुख्य बुँदाहरूमा आधारित रहेर अनुसन्धान गर्छौं जसले कुनै क्यासिनो विश्वसनीय छ कि छैन भनेर दर्शाउँछ । हामीले इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोहरू मात्रै समीक्षा गर्ने भएकाले एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको क्यासिनो वा अनलाइन जुवा साइटको इजाजतपत्र हो । अर्को महत्वपूर्ण बुँदा क्यासिनोको सुरक्षा हो जहाँ हामीले वेवसाइट र सफ्टवेयरसँगको जडान पूरै इनकृप्टेड छ कि छैन र SSL मार्फत सुरक्षित गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । अन्त्यमा हामी कम्पनी कहाँ दर्ता भएको छ र यसलाई कसले चलाईरहेको छ र सार्वजनिकरूपमा व्यापार गरिरहेको छ कि छैन भनेर बुझ्न कम्पनीको पृष्ठभूमि जाँच गर्छौं ।
पैसा डिपोजिट र ग्राहक सहायतालाई सम्पर्क
हामीबाट सकारात्मक समीक्षा पाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको यसमा डिपोजिट गर्न कति सजिलो छ भन्ने हो । यो चरणमा हामी सबै स्वीकार गरिएका डिपोजिट विधिहरू जाँच गर्छौं र सबैभन्दा लोकप्रिय विधिहरू, जस्तै, मास्टरकार्ड, बैंक ट्रान्सफर, पेपाल, नेटेलर र अरु अन्य विधिहरू पनि समाविष्ट छन् कि छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्छौं । यो चरणमा हामी ग्राहक सहायतासँग आफ्नो पहिचान नखुलाइकन निश्चित प्रश्नहरूको साथमा सम्पर्क गर्छौं ।
खेल खेल्ने र जितेको रकम क्यास आउट गर्ने
हाम्रो समीक्षा प्रक्रियाको अन्तिम चरण सम्भवत: सबै अनलाइन क्यासिनो खेलाडीका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ । हामीले भर्खरै डिपोजिट गरेको पैसाले हामी विभिन्नखाले क्यासिनो खेलहरू खेल्छौं जस्तै, स्लट, ब्ल्याकज्याक वा रोलेट जस्ता टेबुल खेल, पोकर र खेल सट्टेबाजी वा लट्री (चिट्ठा) जस्ता अन्य खेलहरू । बाँकी रकम र जितेको रकमलाई त्यसपछि क्यास आउट गर्छौं । छिटो क्यास आउट गर्ने क्यासिनोहरूले थप अंक पाउँछन् ।
क्यासिनोलाई मूल्यांकन गर्ने:
यदि माथिका सबै चरणहरूको सकरात्मकरूपमा मूल्यांकन गरिएको छ भने हामी अन्तिम अंक दिन्छौं र हाम्रो नतिजाको विस्तृत समीक्षा लेख्छौं । प्रत्येक क्यासिनोलाई3महिनामा फेरि जाँच गरिन्छ र हाम्रो समीक्षाको अंक सोही अनुसार अपडेट गरिन्छ । हामी पारदर्शीताको वकालत गर्ने भएकाले हामी प्रत्येक क्यासिनोको राम्रो र नराम्रो पक्षहरू उल्लेख गर्नेछौं । खराब अंक पाउने क्यासिनोहरूलाई हाम्रो कालोसूचीमा राखिन्छ । त्यसैले एक खेलाडीको रूपमा तपाईंले यी क्यासिनोहरूमा नखेलेर आफ्नो पैसा र जितेको रकम सुरक्षित हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ ।
हाम्रा सिफारिस गरिएका क्यासिनोहरू हेर्नुहोस्
अनलाइन क्यासिनो र जुवाका खेलहरू
यदि तपाईं भाग्यमा मात्रै आधारित खेल मन पराउनुहुन्छ भने स्लट्स उत्कृष्ट रोजाई हुनसक्छ । तपाईंले उनीहरूकै पेआउट, नियम र थिमहरू सहित फरक फरक स्लट खेल पाउनुहुन्छ । यसलाई क्लासिक3स्लटमा सामान्य राख्नुहोस् वा बहु-प्लेलाइन स्लट खेल सहित उच्च बिन्दुमा पुग्नुहोस् ।
प्रोग्रेसिभ ज्याकपट स्लट्स
तपाईंले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुभएको बेलामा प्रोग्रेसिभ ज्याकपट स्लट्स खेल्नुहोस् । यी खेलहरू अन्य नेतृत्वकारी अनलाइन क्यासिनोहरूसँग प्रदान गरिन्छ जसको अर्थ ज्याकपट लाखौँ डलर सम्म पुग्छ । यसमा जित्नका लागि धेरै सीप चाहिदैन तर भाग्य चाहिन्छ ।
भिडियो पोकरले तपाईंलाई उत्कृष्ट पोकर ह्यान्ड बनाउने मौका दिन्छ । तर अरु खेलाडीहरूसँग खेल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन । यहाँ तपाईं र कम्प्युटर सफ्टवेयर हुन्छ । साथै क्यासिनोमा यो खेलबाट उत्कृष्ट भुक्तानी प्रतिशत पाइन्छ ।
क्लासिक पोकरदेखि,3कार्ड पोकर र टेक्सास होल्ड’एम सम्मका विभिन्नखालका पोकर खेलहरूको आनन्द लिनुहोस् । यदि तपाईंलाई आफूसँग सीप र सही पोकर अनुहार छ भन्ने लाग्छ भने पोकर टुर्नामेन्टहरू हेर्नुहोस् जहाँ हरेक प्रकारका पुरस्कारहरू तपाईंले जित्नका लागि पर्खिरहेका छन् ।
जित्ने मौका जति भए पनि तपाईंले ब्ल्याकज्याकका विभिन्न प्रकारहरूबाट रमाइलो र उत्साह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । क्लासिक, प्रोग्रेसिभ, भेगास स्ट्रिप, र युरोपियन ब्ल्याकज्याक केही उपलब्ध विकल्पहरू हुन् ।
सबैभन्दा लोकप्रिय क्यासिनो खेल मध्येको एक, रोउलेट तपाईंले चाहेअनुसारको रणनीति प्रयोग गरेर खेल्न सकिन्छ । यसका विभिन्न प्रकारहरू जस्तै युरोपियन रोउलेट, मिनी रोउलेट, र प्रोग्रेसिभ रोउलेट नछुटाउनुहोस् ।
लाइभ डिलर खेलहरू
लाइभ खेलहरू मार्फत क्यासिनोलाई आफ्नै घरमा लानुहोस् ! भिडियो स्ट्रिम मार्फत वास्तविक क्यासिनोमा जोडिनुहोस् । तपाईंले ब्ल्याकज्याक, रोउलेट, र पोकर जस्ता केही विकल्पहरू पाउनुहुनेछ । डिलरसँग च्याट गर्नुहोस् र आफ्नो घरमा नै आधिकारिक क्यासिनो अनुभव लिनुहोस् ।
अर्को भलिबल खेल कसले जित्छ भन्ने बारेमा बाजी थाप्नुहोस् वा आफूलाई मन पर्ने घोडामा पैसा लगाउनुहोस् र भाग्य आफ्नो पक्षमा छ कि भनेर हेर्नुहोस् ।
स्क्र्याच कार्ड, केनो र बिंगो जस्ता क्यासिनो खेलहरू सामान्य रुपमा खेल्नुहोस् । तपाईंले आफ्नो दिमाखलाई आराम दिंदै भाग्य पनि जाँच्न चाहेको बेलामा यो राम्रो छनौट हुनसक्छ ।
वास्तविक पैसाको अनलाइन जुवा
सबै उत्कृष्ट अनलाइन क्यासिनोहरूले तपाईंलाई नि:शुल्क खेल्न दिन्छन् । यो अपरेटर र सफ्टवेयरको लागि अनुभव प्राप्त गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो तर यसले तपाईंलाई सिमित क्यासिनो अनुभव मात्रै दिन्छ । आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्न वास्तविक पैसा प्रयोग गरेर जुवा खेल्दा रमाइलो र उत्साह आउँछ । वास्तविक पैसा प्रयोग गरेर खेल्नुका केही फाइदाहरू यस्ता छन् ।
क्यासिनो खेलका पूर्ण संग्रहमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्
बोनस कार्यक्रमबाट फाइदा लिनुहोस् (जसमा धमाकेदार स्वागत बोनस समावेश छ)
इमान्दारीता अंकहरू सङ्कलन गर्नुहोस् जसलाई थप क्यासिनो क्रेडिटको लागि रिडीम गर्न सकिन्छ
क्यासिनोले थप पुरस्कार र प्रवर्द्धनहरू नियमितरूपमा प्रदान गर्छन्
निमन्त्रणा-मात्र टुर्नामेन्टमा विशेष पहुँच
नेपालमा धेरै जुवाडेहरू मोबाइलमा खेल्न चाहन्छन् । तपाईंले जहाँसुकै जतिबेला पनि विभिन्नखाले मोबाइल खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ! हामीले सिफारिस गरेका क्यासिनोहरू एन्ड्रोइड, एप्पल र विन्डोजजस्ता सबै लोकप्रिय स्मार्टफोन र ट्याबलेटहरूमा खेल्न मिल्छ । तपाईंले एन्ड्रोइड र आईओएसका लागि डाउनलोड गर्न मिल्ने एपहरू पाउनुहुनेछ । धेरैजसो क्यासिनोहरूले तुरुन्तै खेल्न विकल्प प्रदान गर्छन् जसमा तपाईंले सीधै आफ्नो ब्राउजरमा खेल खेल्न सक्नुहुन्छ । यो स्लट, टेबल खेल, र लाइभ खेल खेल्नको लागि पनि उत्कृष्ट तरिका हो । आफ्नो क्यासिनो खातामा पैसा हाल्न वा निकाल्नका लागि सार्वजनिक वाईफाई प्रयोग भने नगर्नुहोस् किनभने यो सुरक्षित हुँदैन ।
नेपालका स्थलगत क्यासिनोहरू
नेपालमा6वटा स्थलगत क्यासिनोहरू छन् जसमध्ये धेरैजसो काठमाडौंमा छन् । विदेशी पर्यटकहरूमा लोकप्रिय यी क्यसिनीहरूले विभिन्न टेबल खेल, स्लट र भीआईपी कक्षहरू फिचर गर्छन्
यो 5-तारे रिसोर्टले तपाईंलाई उत्साहजनक Casino Mahjong मा आमन्त्रण गर्छ, जुन 2018 को नेपालको उत्कृष्ट क्यासिनो हो । यो क्यासिनोले 10 वटा टेबुल खेलहरू प्रदान गर्छ जसमा ब्ल्याकज्याक, रोउलेट, र baccarat का साथै 50 भन्दा बढी खेलहरू पर्छन् । यदि तपाईंलाई भोक लागेको छ भने तपाईंले होटल भित्र रहेका चारवटा रेस्टुरेन्टमध्येको कुनै एक छान्न सक्नुहुन्छ जहाँ भारत, चीन र क्लासिक नेपाली कुजिनका खानेकुराहरू खान पाउनुहुन्छ ।
शोल्टी कराउन प्लाजा, ताहाचल मार्ग, काठमाडौं 44600, नेपाल
होटल याक एण्ड यतिभित्र रहेको क्यासिनो रोयल सरकारले देशमा क्यासिनो बन्द गरेपछि सन् 2015 मा फेरि खुल्ने पहिलो क्यासिनो थियो । यस क्यासिनोको शताब्दी पुरानो दर्बारमा टेबल खेलदेखि लिएर स्लट मेशिनसम्मका विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध छन् । यो होटल र क्यासिनोले आफ्ना अतिथिहरूलाई छुट्टै शाही अनुभूति दिन्छ ।
लाल दरबार मार्ग, काठमाडौं 44600, नेपाल
एभरेष्ट क्यासिनोले आफ्ना अतिथिहरूलाई रोउलेट र ब्ल्याकज्याक जस्ता परम्परागत टेबुल खेलहरू प्रदान गर्छ । रात बढ्दै जाँदा रोउलेट टेबुल व्यस्त हुँदै जाने भएकाले एउटा राम्रो सिट खोजेर बसिहाल्नुहोस् । अतिरिक्त मनोरञ्जन खोजिरहेका मानिसहरूका लागि नर्तकी र गायकहरूले दैनिक प्रस्तुती दिन्छन् ।
मदन भण्डारी रोड, काठमाडौं 44600, नेपाल
क्यासिनो प्राइड नेपाल
विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका र आरामदायी होटलमा बस्न मन पराउने मानिसहरूका लागि क्यासिनो प्राइड उत्कृष्ट रोजाइ हो । तपाई रोउलेट, ब्ल्याकज्याक, पोकर खेल्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न स्लट मेशिनबाट आफूलाई मन पर्ने छान्न सक्नुहुन्छ । क्यासिनोका साथै होटलमा ठूलो स्विमिङ पुल, ब्युटी सैलुन, र फिटनेस सेन्टर रहेको छ । रात परेपछि होटलको क्लब खुल्छ जो शानदार कक्टेलका लागि प्रसिद्ध छ ।
हायात रेजेन्सीभित्रको क्यासिनो प्राइड नेपाल प्रा. लि., काठमाडौं 44600
अहिले नै खेल्न चाहनुहुन्छ? नेपालको #1 अनलाइन क्यासिनोमा जानुहोस्
जित्ने दर N/A
नेपालमा कुन-कुन क्यासिनो खेलहरू लोकप्रिय छन्?
नेपालीहरू धेरै क्यासिनो खेलहरू खेल्न रुचाउँछन् तर केही खेलहरू अरु भन्दा बढी लोकप्रिय छन् । ब्ल्याकज्याक, रोउलेट, र पोकर सबै खेलाडीहरूका लागि अनलाइन क्यासिनोमा उपलब्ध छ ।
के म नेपाली रुपैयाँ प्रयोग गरेर खेल्न सक्छु?
हो, हामीले सिफारिस गर्ने धेरैजसो क्यासिनोहरूले नेपाली रुपैयाँ स्वीकार गर्छन् । यदि नेपाली रुपियाँ स्वीकार्य मुद्राको रूपमा सूचीकृत गरिएको छैन भने तपाईंले आफ्नो पैसालाई USD, EUR, वा GBP मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले पैसा सटही गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा लाग्न सक्ने शुल्कको बारेमा विचार गर्नुहोस् ।
मैले नेपाली अनलाइन क्यासिनोमा कसरी डिपोजिट गर्न र क्यास आउट गर्न सक्छु?
नेपाली खेलाडीहरूले सामान्यतया क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर पैसा डिपोजिट गर्न वा निकाल्न सक्छन् । ठूलो कारोबार गर्नु परेमा बैंक ट्रान्सफर अर्को विकल्प छ ।
के मैले वास्तविक पैसाको लागि खेल्नुपर्छ?
पर्दैन । तपाईंले हामीले सिफारिस गर्ने कुनै पनि अनलाइन क्यासिनोमा नि:शुल्क पैसाका खेल खेल्न सक्नुहुन्छ । एकपटक तपाईंले खेल, सफ्टवेयर वा क्यासिनोको बारेमा पर्याप्त कुरा जानें भन्ने लागेपछि तपाईंले वास्तविक पैसा प्रयोग गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ र क्यासिनो बोनसहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ ।
के मैले मोबाइलबाट अनलाइन जुवा खेल्न सक्छु?
सक्नुहुन्छ । तपाईंले एन्ड्रोइड स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, आइफोन वा विन्डोज मोबाइलहरू प्रयोग गरेर उत्कृष्ट वास्तविक पैसाको र नि:शुल्क खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ । सामान्यतया तपाईंले तुरुन्तै ब्राउजरमा खेल्ने वा क्यासिनो एप डाउनलोड गर्ने विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ ।
स्वागत बोनस के हो र मैले कसरी दावी गर्न सक्छु?
स्वागत बोनस क्यासिनो अनलाइनका नयाँ खेलाडीहरूलाई प्रदान गरिने प्रवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन रकम हो । तपाईंले बोनस पाउनको लागि न्यूनतम वास्तविक रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया खेलको प्रतिशतको आधारमा प्रदान गरिन्छ । यसलाई दावी गर्न, नि:शुल्क खाताको लागि साइन अप गर्नुहोस् । धेरैजसो क्यासिनोहरूले तपाईंलाई यस समयमा स्वागत बोनस स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्छन् र यही समयमा तपाईंले दावी गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले यो अफर स्वीकार गर्नुभएन भने तपाईंले बोनस गुमाउन सक्नुहुन्छ । अन्य क्यसिनोहरूले तपाईंलाई निश्चित दिनभित्रमा यसको फाइदा लिने मौका दिनेछन् ।
मैले उत्कृष्ट अनलाइन क्यासिनोहरू कहाँ फेला पार्न सक्छु?
तपाईंले नेपालमा टप-रेटेड क्यासिनोहरू यहाँ गएर पाउन सक्नुहुन्छ! हाम्रा अनुभवी र दक्ष Casino.org समीक्षा टिमले नेपाली खेलाडीहरूलाई उत्कृष्ट क्यासिनो सिफारिस गर्नुपूर्व सावधानीका साथ सयौं विभिन्नखाले साइटहरूको मूल्यांकन गर्नमा समय बिताएको छ । तपाईंले हामीले सिफारिस गरेको क्यासिनो अनलाइन चयन गर्नुभयो भने तपाईं यो आफूलाई उत्कृष्ट जुवाको अनुभव प्रदान गर्न सक्ने सुरक्षित क्यासिनो हो भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले अनलाइन जुवा खेल्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले उत्तरदायी जुवा खेलको बारेमा नियमहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ । यी नियमहरूमा कटिबद्ध रहनुहोस् र तपाईंले तनावपूर्ण अवस्था झेल्नुपर्ने हुँदैन । एक उत्तरदायी जुवा खेलाडी हुनका लागि तपाईंले:
जुवालाई मनोरञ्जनको रूपमा लिनुपर्छ, पैसा कमाउने तरिकाको रूपमा होइन
आफ्नो गच्छले नभ्याउने वा अन्य कुराको लागि आवश्यक पर्ने पैसा बाजी नलगाउनुहोस् (जस्तै, बिल, भाडाको लागि छुट्याएको पैसा)
खेल कसरी काम गर्छ र यसमा जित्ने सम्भावना कति हुन्छ भन्ने बारे बुझ्नुहोस्
नियम र सर्तहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस्
जुवामा हारेको पैसा जसरी पनि उठाउँछु भनेर पछि नलाग्नुहोस्
जुवा खेल्दा रक्सी पिउने नगर्नुहोस्
Gamblers Anonymous: यदि तपाईंलाई जुवाको लत लाग्यो वा जुवाको लत लागेको अरु कोही व्यक्तिको बारेमा तपाईंलाई थाहा छ भने तपाईंले Gamblers Anonymous बाट सहयोग र सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
Gambling Therapy: जुवाको लत लागेका मानिस र उनीहरूका परिवारहरूलाई नि:शुल्क सल्लाह र सहायता प्रदान गर्ने एउटा विश्वव्यापी सेवा ।
विश्वव्यापी अनलाइन क्यासिनो निर्देशिकाहरु
Casino.org संसारकै अग्रणी स्वतन्त्र अनलाइन गेमिङ प्राधिकरण हो जसले विश्वासिलो अनलाइन क्यासिनो समाचार, निर्देशिकाहरु, समिक्षाहरु र सूचना १९९५ देखि प्रदान गरिरहेको छ l